Fananganana indray taona.travel: tafiditra ao ve ny tombontsoanao?
Home » Travel Associations News » Fananganana indray taona.travel: tafiditra ao ve ny tombontsoanao?
Manangana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany izahay. Miaraka amin'izany isika rehetra. Misy mpitondra vaovao, olona vaovao miditra, ary ianao dia tokony ho ao anatin'izany.
Fanarenana.travel herintaona ny 5 martsa ary afaka mandray anjara amin'ny adihevitra ianao.
Nomanina tamin'ny sisin'ny ITB 2020 tany Berlin, nofoanana ny ITB, saingy namboarina indray ny dia lavitra tao amin'ny Grand Hyatt Hotel Berlin tamin'ny 5 martsa 2020. Herintaona taty aoriana, 1200 mahery ireo mpitarika indostrian'ny fizahantany ary 127 no nanatevin-daharana ny dinika.
Manasa anao handray anjara amin'ity adihevitra lehibe ataon'ny World Tourism Network momba ny hoe inona, inona, ary ny ho avin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany. Mba hisolo tena ny tombontsoanao dia asaina ireo matihanina fizahantany hanatevin-daharana.
Ny fifanakalozan-kevitra lehibe indrindra sy lehibe indrindra momba ireo mpikambana amin'ny sehatry ny fizahantany any amin'ny firenena 127 dia mandeha matanjaka. Tamin'ny 5 martsa, ny Tambajotra fizahan-tany manerantany hankalazaina herintaona taorian'ny dinika manerantany voalohany momba ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. "Miara-dia amin'izany isika rehetra," hoy i Juergen Steinmetz, mpanorina sy filohan'ny WTN. “Noho izany, ny mpikambana tsirairay ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia tokony ho ao anatin'ity resaka ity. Manangana an'ity orinasa ity izahay. "
Tamin'ny fivoriana 5 martsa, eTurboNews nanasa vondrona matihanina fizahantany ho any Hotel Grand Hyatt any Berlin hiresaka momba ny valiny tsara indrindra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany momba ny fandrahonana vaovao Coronavirus. Nifarimbona tamin'ny hetsika ny hetsika PATA, the Biraon'ny fizahantany afrikanina, ary ny Ivotoerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fitantanana krizy tapaky ny volana febrily 2020, buandro vitsivitsy talohan'ny nofoanana ny ITB Berlin 2020 .
Ny fivoriana dia natao ary ny fifanakalozan-kevitra eran-tany voalohany momba ny valin'ny COVID19 avy amin'ny fizahan-tany nataon'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany.
Rebuilding.travel dia natomboka ary nandritra ny 6 volana manaraka dia nitombo ny fananana mpikambana tao amin'ny firenena 100 mahery. Tamin'ny volana Desambra 2020, namboarina indray ny dia lavitra ary ny Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN) niforona.
Mpitarika fizahan-tany 1274 any amin'ny firenena 127 izao no namorona vondrona liana 13 samihafa ary manohy ny adihevitra momba ny fanarenana ny fizahan-tany sy fizahan-tany ankehitriny.
Amin'ny 5 martsa 2021, ireo mpitarika fizahan-tany dia hisaintsaina ny taona ary hanome torolàlana momba izay antenaina ho amin'ny dia sy fizahan-tany mandroso.
Ny tambajotra eran-tany fizahan-tany dia miarahaba ireo sosokevitra fanolorana sy mpandahateny. Mandeha https://wtn.travel/contact/ handefa ny hevitrao.
Hisy toerana voafetra ho an'ireo mpandray anjara manatevin-daharana ny hetsika Q&A.
Misokatra izao ny fisoratana anarana.
- 07.00 maraina London Time kitiho eto
- 06.00 hariva Fotoana London kitiho eto
Misimisy kokoa momba an'io sy ireo hetsika hafa: www.worldtourismevents.com
Misimisy kokoa momba ny tambajotran'izao tontolo izao: www.tv.travel
Hawaii dia miverina mankasitraka ny CDC: Lesona nianarana
IATA: Pass Pass an'ny COVID-19 hanombohana amin'ny volana martsa